विश्वयुद्ध हुँदै ट्रम्प-किमको सुरक्षासम्म तैनाथ ‘गोर्खाली’लाई भारतले चिनेकै छैन ! «
Published : 12 June, 2018 4:41 pm
तर भारतले किन चिनेन ?
यहाँनिर, अर्काे बिडम्पनाको कुरा के हो भने यसरी विश्वलाई नै सुरक्षा दिइरहेको गाेर्खालीको अाफ्नै भूमि भने सुरक्षित छैन । खासगरी दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतबाट बारम्बार नेपालकाे सिमाना मिच्ने र सीमावर्ती क्षेत्रका जनतामाथि अत्याचार गर्ने क्रम राेकिएकाे छैन, झन बढ्दै गएकाे छ ।
विश्वयुद्धमा वीरताका साथ लडेका, अंग्रेस फाैजलार्इ पराजित गरेका र विश्वकै शक्तिसम्पन्न देशका नेता सुरक्षा दिइरहेका गोर्खालीले आफ्नो मातृभूमिलाई सुरक्षा दिन नसक्ने कहीँ हुन्छ र ? हामीकहाँ ‘राष्ट्रवादी’काे पगरी गुथ्ने नेताहरू नै निकम्मा छन्, पराधिन मानसिकताले ग्रस्त छन् । उनीहरू छिमेकीसँग सीमा सुरक्षाकाे विषयमा खुलेर कुरा राख्न सक्दैनन् ।
नेपाल-भारतबीचको सिमा विवादले वषौँदेखि पिडीत छन् नेपालीहरु । पटकपटक भारतले नेपालीलाई सिमानाको विषयमा थिचोमिचो र अत्याचार गर्दै आएको छ । नेपालीहरुले सिमाको विषयमा आवाज उठाउँदा भारतीय पक्षले नेपालीहरुमाथि बल समेत प्रयोग गर्ने गरेका उदाहरणहरु थुप्रै छन ।
सन् १८६० बाट सुरु भएको सिमा अतिक्रमण र विवाद आजसम्म पनि उस्तै छ । हालसम्मका केही तथ्याङ्कहरुलाई हेर्ने हो भने नेपालमा राणा कालदेखि हालसम्म पनि बारम्बार भारतीय पक्षबाट नेपालको भूभाग अतिक्रमण भइरहेको छ ।
कुन सरकारका पालामा नेपाली भूमि कति मिचियो ?
सिमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार राणाकालीन समयमा १४ हजार ५ सय १५ हेक्टर नेपाली भूभाग भारतीय पक्षबाट मिचिएको थियो । त्यसपछि राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन कालमा ३७ हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमणमा परेको देखिन्छ ।
तुलसी गिरी प्रधानमन्त्री हुँदा १५ हेक्टर जमिन मिचिएको थियो भने सुर्यबहादुर थापा पटकपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ३ सय ९ हेक्टर जमिन अतिक्रमणमा परेको बताइन्छ ।
त्यसैगरी लोकेन्द्रबहादुर चन्द पटक-पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ३ सय ८९ हेक्टर जमिन मिचिएको थियो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा १ हजार सय २ हेक्टर भूभागमा अतिक्रमण भएको थियो ।
उता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री ३ पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुँदा ९७ हेक्टर र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा ५८ हेक्टर भूभाग मिचिएको सीमाविद्हरू बताउँछन् । त्यसबीचका सरकारका पालामा पनि धेरथोर नेपाली भूभागहरु अतिक्रमित भइरहे तर पनि सिमा विवाद सुल्झाउने विषयमा कोही पनि अग्रसर भएनन् ।
१५ सय पिल्लर गायब
सन् २००७ सम्म नेपाल-भारत सीमामा निर्माण गरिएका ४ हजार ३ सय ६० पिलर निर्माण गरिएका थिए । तर तीसमध्ये हालसम्म १५ सय हाराहारिको पल्लिरहरु गायब भैसकेका छन् ।
कति सीमास्तम्भ गलत नियत राखी उखेलेर फ्याँकिए भने कतिलाई खोलाले, बाढीले बगाएकाे बताइन्छ । सीमामा हाल कायम पिल्लरमध्ये धेरै पिल्लरहरु पनि मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।
ट्रम्प–किमको सुरक्षा दिइरहेका गोर्खालीको छातीमा के देश दुख्दैन र ? मातृभूमि यसरी बारम्बार मिचिरहँदा गोर्खालीको मन कस्तो हुन्छ होला ? यति धेरैको सुरक्षा दिने र विश्वमै बहादुर कहलिने गोर्खालीकाे देश किन अाज निरीह छ ?